भूत प्रेतसँग डराएर यी कलाकारले छोडिन् अभिनय Yes Khabar | Nepali News from Nepal | Recent News
भूत प्रेतसँग डराएर यी कलाकारले छोडिन् अभिनय
मुम्बई – भारतको चर्चित शो ‘सास बिना ससुराल’ बाट भारतीय दर्शकमाझ लोकप्रियता कमाएकी कलाकार ऐश्वर्या सखुजा पछिल्लो समय टिभीको दुनियाँबाट गायब छिन् । उनी यसरी गायब हुनुको कारण काम नपाउनु थिएन । बरु ऐश्वर्याले यो ब्रेकको कारण ‘नागिन’, ‘दिव्य दृष्टि’, ‘सितारा’ जस्ता सुपर नेचुरल शो रहेको बताएकी छिन् । ऐश्वर्याले एक अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘सुपर नेचुरल शो को ट्रेन्डमा म आफूलाई जोड्न सकिन, मलाई यस्ता शो का लागि अफर आएको थियो, तर मैले यो भूमिकामा कनेक्सन बनाएर बस्न गाह्रो भएको थियो ।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘म यो कुरा सम्झन सकिन कि, १२ घण्टा यो शो चल्यो भने यस्तो भूमिका कसरी निभाउन सक्छु रु जुन भूमिकामा म आफू सहमत हुन सकिन, मलाई लाग्छ, सधै टेलिकास्ट गर्नुपर्दा यस्ता सिरियललाई धेरै राम्रो बनाउन पनि समय पाइँदैन ।’ भारतीय टिभी च्यानलमा पछिल्लो समय यस्ता खालका टिभी शोहरु बढी नै आउन थालेका छन् ।
त्रिविका हज्जारौ त्रुटी : पूर्णाङक भन्दा बढी नम्बर दिएर मार्कसिट
काठमाडौं - लाखौ विद्यार्थीको भविष्यको लेखाजोखा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गम्भीर गल्ती गरेको खुल्न आएको छ ।
त्रिविले परीक्षार्थीलाई प्राप्ताङक दिँदा गम्भीर त्रुटी गरेको पाइएको छ । उसले एक विद्यार्थीलाई कुल ४० नम्बर पूर्णाङक भएको ‘जिओलोजी प्राक्टिकल’ विषयको लब्धाङ्क–पत्रमा ४२ नम्बर दिएको छ ।
बीएस्सी चौथो वर्षको विषयमा यस्तो त्रुटि भएको हो । यो विषयमा उत्तीर्णाङक १६ छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भने छपाई त्रुटिका कारण यस्तो समस्या भएको बताएको छ । परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भन्नुभयो, ‘विषयगत कोड छपाई गर्दा बिग्रेर यस्तो समस्या आएको हो । पूर्णाङक भन्दा बढी उत्तीर्णाङ्क ल्याएका विद्यार्थीलाई नयाँ लब्धांकपत्र दिइसकिएको छ ।’
काठमाडौं - सडक कालोपत्र भएको एक वर्षमै गौरीघाट–टुसाल सडकमा खाल्डाखुल्डी हुन थालेको छ। सडक कालोपत्र गर्दा गुणस्तरीय काम नभएकाले एक वर्षमै जीर्ण भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। तोकिएको समयभन्दा बढी समय लगाएर बनेको सडक निर्माण भएको एक वर्षमै जीर्ण बन्दा हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको समस्या रहेको स्थानीय रवि भट्टराईले बताए।
निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने, सडक डिभिजन कार्यालयले अनुगमन नगर्ने गरेकाले कमजोर सडक निर्माण भएको हे। तीन किमीको यो सडकको दर्जनभन्दा बढी स्थानमा खाल्डाखुल्डी परेको छ। कतिपय स्थानमा भने स्थानीयवासीले खानेपानीको पाइप लैजाँदा खनेको खाल्डो नपुरिँदा त्यहीँबाट सडक जीर्ण बन्न थालेको छ ।
सडक सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र बिग्रिए निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सडक डिभिजन कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई पानीको पाइप बिच्छ्याउन अनुमति दिए पनि सडक बनाउन नलगाएको कुमारीगाल टोल सुधार समितिका अध्यक्ष मुकुन्द अधिकारीले बताए। गत वर्ष वर्षामा यो सडक विस्तार सम्पन्न भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कैलाशकुमार श्रेष्ठ निर्माण भएको एक वर्ष अगावै सडक जीर्ण भए निर्माण व्यवसायीलाई मर्मत गराउने बताए।
गहना बन्धक राखेर ४८ प्रतिशतसम्म व्याज असुल्ने व्यक्ति पक्राउ
दाङ- सर्वसाधारण व्यक्तिको सुन राखेर मिटर व्याजमा रकम असुल्दै आएका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ निवासी ६० वर्षीय तुलसीराम गुप्ता रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तुलसीपुरमा फोटो स्टूडियो सञ्चालन गर्दै आएका गुप्ताले त्यहीबाट वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्तिको सुन बन्धक राखेर मिटर व्याजमा रकम असुल्दै आएको गुनासोको आधारमा पक्राउ गर्नुपरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रेमबहामदुर शाहीले तुलसीपुर ७ निवासी १९ वर्षीया विपना रेग्मी पोखरेलको जाहेरीको आधारमा गुप्तालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए।
खरेलले गुप्तासँग सुन धरौटी राखेर १५ प्रतिशत व्याजदिने सर्तमा पटक/पटक गरि ४० हजार रकम लिएको र वैशाख १ गते सावा व्याजसहित रकम बुझाई सुन फिर्ता लिन खोज्दा गुप्ताले ४८ प्रतिशत व्याज दिए मात्रै सुन दिने बताएपछि पोखरेल प्रहरीको न्यायको लागि पुगेकी थिइन्। पोखरेलले आफू ठगीमा परेको हुँदा गुप्ता उपर आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गरिपाउँ भनि दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले गुप्ताको घरमा वैशाख २ गते घर खानतलासी थप अन्य २ सय ६ जना मानिसहरुको सुन पनि फेला पारेको थियो।
‘गुप्ताको घरमा पोखरेलको गरगहनाबाहेक थप २ सय ६ जना मानिसको विभिन्न प्रकारका सुनका गरगहनाहरु फलामको घर्राहरुमा बैंकमा जस्तै गरि स–सना प्लाष्टिकका थैली र डिब्बाहरुमा फेला पार्‍यौ,’ डिएसपी शाहीले भने, ‘त्यसबाट गुप्ताले बर्षौंदेखि सुनका गरगहना बन्धक राखेर सर्वसाधारणबाट मिटर व्याजमा रकम असुल्ने गरेको स्पष्ट भयो।’ गुप्ताले मानिसको सामान्ने विवरण राखेर मिटर व्याजमा रकम असुल्दै आएको हुँदा पक्राउ गरि आवश्यक अनुसन्धानको पक्रिया अगाडि बढाइएको डिएसपी शाहीले बताए।
प्रहरीले गुप्ताको घरबाट २०६ थान सुनका गरगहना र विभिन्न व्यक्तिको नाम लेखिएको एक थान रजिष्टर बरामद भएको जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी दाङका प्रवक्ता विनोद विक्रम शाहले पक्राउ परेका गुप्ताविरुद्ध दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको जानकारी दिए। गुप्ता विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९५ विपरितको कसुर सम्वन्धि मुद्दा दायर गरि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रबक्ता शाहले जानकारी दिए।
तेक्वान्दो खेल्न जापान जान लागेका खेलाडीलाई सिटी एक्सप्रेसको सहयोग
काठमाडौं - तेक्वान्दो च्याम्पियनशिपका लागि जापान जान लागेका खेलाडीहरुलाई सिटी एक्सप्रेसले ट्रयाक सुट उपलब्ध गराएको छ । जापानको ओसाकामा हुन गइरहेको १७ औं वाता ओपन अन्तर महादेशीय तेक्वान्दो च्याम्पियनशिपमा नेपाल तेक्वान्दो संघको तर्फबाट भाग लिन नेपालबाट सहभागी तेक्वान्दो खेलाडीहरुलाई सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट सफलताको शुभकामना दिदैं सम्पुर्ण खेलाडीहरुलाई सिटी एक्सप्रेसले ट्रयाक सुट उपलब्ध गराई सहयोग गरेको हो ।
उक्त वाता ओपन अन्तर महादेशीय तेक्वान्दो च्याम्पियनशिप जापानको ओशाकामा यहि अप्रिल २० तारिक देखि सुरु हुँदैछ । विश्वका विभिन्न मुलुकबाट सहभागिता जनाइने यस च्याम्पियनशिपमा नेपालले पनि भाग लिन लागेको हो । सिटी एक्सप्रेसले रेमिट्यान्स क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै बिगत १२ वर्ष देखि विश्व भरी आफ्नो रेमिट एजेन्ट्हरुबाट ७००० भन्दा बढी नेपालको एजेन्ट्हरु मार्फत भुक्तानी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
अनौठो घटनाः स्याउजत्रो आकारको बालक, अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने तयारी
टोकियो - जापानको एक अस्पतालमा गत अक्टोबरमा जन्मिएको विश्वकै सबैभन्दा कम तौलको बालकलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्न लागिएको जापानी चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ती बालक जन्मदा २२ सेन्टिमिटर अग्ला थिए अर्थात् स्याउको आकारका थिए । रिउसुके सेकिया नाम राखिएका ती बालककी आमा तोशिकामा उच्च रक्तचापकी बिरामी थिइन् ।
चिकित्सकहरुले तोशिकाको २४ हप्ता पाँच दिनको गर्भबाट सफलतापूर्वक सिजेरियन गरी ती बालकलाई जन्म दिएका थिए । गत अक्टोबर १, २०१८ का दिन जन्मेका ती बालकको तौल जन्मदा २५८ ग्राममात्र थियो । जापानमा यो दोस्रो अनौठो घटना हो । यसअघि अघिल्लो वर्ष जापानमै जन्मिएका अर्का एक बालकको तौल २६८ ग्राम थियो । ती बालकलाई गत फेब्रुअरीमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । अस्पतालको इन्टेन्सिभ केयरमा सात महिना राखेपछि रेयुसुकेको तौल १३ गुणा बढेको थियो । अहिले ती बालकको तौल ३ किलोग्रामभन्दा बढी भइसकेको छ । ती बच्चालाई जापानको नागानो बाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको छ ।
जन्मिदा बच्चा यति सानो थियो कि छुँदै भाँच्चिएला जस्तो लाग्थ्यो । मलाई त अति डर लाग्थ्यो, आमा तोशिकाले बताइन् । “अहिले ऊ दूध पिउँछ । हामीले उसलाई नुहाइदिन थालेका छौं । मलाई अति खुशी लागेको छ,” उनले भनिन् । विश्वमै सबैभन्दा कम तौलकी बालिका सन् २०१५ मा जर्मनीमा जन्मिएकी थिइन् । जन्मिदा उनको तौल २५२ ग्राम मात्र थियो । अति साना बालबच्चाको बाँच्ने दर केटीहरुको भन्दा केटाहरुको कम हुने गर्दछ ।
चक्रपथमा सवारी दुर्घटना : ८ महिनामा १५ सय दुर्घटना, २९ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ - आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चक्रपथभित्र भएको सवारी दुर्घटनामा २९ जनाको मृत्यु भएको छ । गत वर्षको साउन १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म चक्रपथमा १ हजार ४ सय ३८ दुर्घटना भएका थिए ।
दुर्घटनाका कारणहरु तीब्र गति, अव्यवस्थित सडक मुख्यतः रहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । धेरैजसो सवारी साधन एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएका छन् । ट्राफिक महाशाखाका अनुसार गत साउनमा ४, भदौमा ४, असोजमा २, कात्तिकमा ४, मंसिरमा ४, पुस ६, माघमा ३ र फागुनमा २ जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो ।
यसैगरी, दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते र सामान्य घाइते हुनेहरुको संख्या धेरै रहेको छ । जसमा गम्भीर घाइते ५३ जना र सामान्य घाइते ९६० जना रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सातदोबाटो र स्वयम्भूमा दुर्घटना हुँदा ५÷५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै कोटेश्वरमा ४, सानेपामा ३, एयरपोर्ट २, नयाँ वषपार्क ३, गौशालामा २, महाराजगञ्ज १, जावलाखेल २, बल्खु १, सुकेधारा १ गरी २९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
कलंकी–कोटेश्वरमा मात्र १३ जनाको मृत्यु
चीन सरकारले बनाएको कोटेश्वर–कलंकी सडक विस्तारमा मात्र १२ जनाको मृत्यु भएको छ । चीनले पाँच वर्ष लगाएर कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको ८ लेनको १० किलो मिटर ४ सय मिटर सडक विस्तार गरेको थियो । करिब ५ अर्ब अनुदान सहायतामा चीनले सो सडक खण्ड विस्तार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । चीन सरकारले गत माघ १४ गते कलंकी–कोटेश्वर सडक विस्तार गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
१ रुपैयाँमा एसइइ पहिलो सिम कार्ड
एसईई विद्यार्थीहरुका लागि एनसेलले ल्यायो पहिलो सिम
काठमाडौं - नेपालको निजी क्षेत्रको टेलिकम संचालक एनसेलले एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै पहिलो सिम अफर प्रस्तुत गरेको छ । यो पहिलो सिमको मूल्य केवल १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सिममा दिन र रातको डाटा प्याकहरु, प्रत्येक पटकको रिचार्जमा एसएमएस र डाटा बोनस तथा माई फाइभ समाविष्ट छन् ।
विद्यार्थीहरुले सिम आफ्नो नजिकैको एनसेल सेन्टरबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सिम प्राप्त गर्न विद्यार्थीहरुले एसईईको प्रवेश कार्ड र अभिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साइजको फोटो एक थान लिएर जानु पर्नेछ ।
१ रुपैयाँमा एसइइ पहिलो सिम कार्ड अफरहरुः
एसईई सिममा समाविष्ट अफरहरु अन्तर्गत मात्र १७.७० मा दैनिक डाटा प्याकहरुः दिनको प्याकमा ३०० एमबी, जुन बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम रहनेछ र रातको प्याकमा असिमित इन्टरनेट, जुन राती ११ बजेदेखि विहान ७ बजेसम्म कायम रहनेछ । सिम सुचारु गरेपछि यदि ग्राहकले ५० रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको रिचार्ज गरेमा बदलामा २४ घण्टाको लागि १०० एमबी डाटा १०० एसएमएस सित्तैंमा प्राप्त गर्नेछ । यस्तै माई फाइभ सेवा एक वर्षको लागि निःशुल्क प्राप्त हुनेछ । जसमा ग्राहकले कुनै पनि ५ वटा एनसेल नम्बरहरुसँग ३० दिनका लागि ० पैसामा र ३० दिनपछि ०.९९ पैसामा ११ महिनाको लागि जोडिन सक्नेछन् । एनसेलले यो पहिलो सिम अफर यही बैशाख ६ गतेदेखि ९० दिनसम्म लागू गरेको छ । थप जानकारीका लागि १७१०३ डायल गर्न सकिनेछ ।
बन्द्री पंगेनी र बिष्णु माँझीको नयाँ गीत ‘मान्छे फकाएर आफ्नो हुँदैन’
काठमाडौं - चर्चित गायक गायिका बद्री पंगेनी र बिष्णु माझीको नयाँ लोक गीत‘मान्छे फकाएर आफ्नो हुँदैन’ सार्वजनिक भएको छ । शुभारम्भ डिजिटलका लागि शम्भु कुवँरको प्रस्तुतिमा तयार भएको गीत निकै मिठास बनेको छ । गीतमा शब्द तथा संगीत बिनोद पराजुलीको रहेको छ ।
गीत आकर्षक म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक भएको हो । थुप्रै कोरस सहित फिल्मी शैलीमा तामझामका साथ निर्माण गरिएको भिडियोमा डासिङ हिरो अभिनेता दीलिप रायमाझी र मोडल अलिशा शर्माको नृत्य देख्न सकिन्छ । काजिशश्रेष्ठको कोरियोग्राफी तथा निर्देशन रहेको भिडियोमा उत्सव दाहालको छायाँकन तथा दीपक बिष्टको सम्पादन रहेको छ ।
नेपोली पराजित, आर्सनल एफए सेमिफाइनलमा
लन्डन - नेपोलीलाई युरोपा लिगको दोश्रो खेलमा आर्सनलले १ गोलले पराजित गरेको छ। समग्रमा ३-० गोल अन्तरले हराउँदै ऊ सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। आर्सनलको जितमा एकमात्र गोल खेलको ३६ औं मिनेटमा भएको थियो। सो गोल एलेसान्द्रे लाकाजेट्टीले गरेका हुन्।
उनले खेलको पहिलो हाफमा प्राप्त फ्रिकिकलाई गोलमा परिणत गरेका थिए। आर्सनलले पहिलो लेग २-० ले जितेको थियो। त्यसपछि दुबैले गोल गर्ने प्रयास गरेपनि गोल हुन सकेन र आर्सनलले सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्‍यो। आर्सनलले सेमिफाइनलको पहिलो लेग मे २ बिहिबार भ्यालेन्सिया विरूद्ध खेल्नेछ।
मुम्बईको घातक बलिङमा दिल्ली ४० रनले पराजित
दिल्ली - जारी इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल)मा मुम्बईले बिहिबार भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई ४० रनले पराजित गरेको छ। हिजो राती भएको खेलमा मुम्बईले पहिले ब्याटिङ गर्दै पाँच विकेटको क्षतिमा १६८ रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ्मा आएको दिल्ली निर्धारित ओभरमा ९ विकेटमा १२८ रनमा रोकिएपछि मुम्बईले जित हासिल गरेको हो। जारी लिगमा मुम्बईको यो छैटौं जित हो। जितसँगै १२ अंक बटुलेर मुम्बई अंकतालिकाको दोश्रो स्थानमा पुगेको छ। ९ म्याचमा चौथो हार बेहोरेको दिल्ली भने १० अंक सहित लिगको तेश्रो स्थानमा रहेको छ। १६९ रनको लक्ष्य पछ्याउन आएको दिल्लीलाई हिजोको खेलमा शिखर धवन र पृथ्वी शाँले राम्रो सुरूवात दिलाएका थिए। उनीहरूले पावर प्लेमा ४८ रन जोड्दै राम्रो सुरूवात दिलाएका थिए। धवन ३५ रनको नीजि स्कोरमा राहुल चाहरबाट आउट भए।
पृथ्वीलाई पनि चाहरले आफ्नो दोश्रो शिकार बनाए। शाँले २४ बलमा २० रनमात्र बनाउन सके। शाँ आउट भएसँगै मुम्बईका बलरहरूले दिल्लीका ब्याटस्म्यानहरूलाई खुलेर खेल्न दिएनन्। कोलिन मनरो र कप्तान श्रेयस अय्यर ३-३ रनमा आउट भए। यस अवस्थामा दिल्ली ४ विकेटको नोक्सानीमा ६३ रनमा थियो। ऋषभ पन्त पनि मात्र ७ रनमा बाहिरिए। उनलाई जसप्रीत बुमराहले बोल्ड गरे। अलराउण्डर अक्षर पटेलले एकसमय खेलमा टिक्दै दिल्लीको जितलाई जिवित राखिराखे भएपनि अन्य विकेटहरू भने लगातार पतन हुँदै गए। लसिथ मालिगांले क्रिस मोरिसलाई ११ रनमा पेभेलियन फर्काइदिए भने किमो पल बुमराहबाट आउट भए। पल खाता नखोली बाहिरिए। रनरेटको दबाबकाबीच पटेल पनि २६ रन जोडेर बुमराहबाट आउट भए। अमित मिश्रा ६ र इशांत शर्मा शून्यमा नटआउट रहे र टोली १२८ मा समेटिदैं हार्‍यो।
पहिलो ब्याटिङ गरेको मुम्बईका लागि क्रुणाल पांड्या र हार्दिक पाड्या पाँचौ विकेटका लागि ५४ रनको साझेदारी गर्दै मुम्बईलाई सम्मानजनक रनस्कोरमा पुर्‍याएका थिए। मुम्बईको पारिको सुरूवात रोहित शर्मा र क्वीटंन डि ककले गरेका थिए तर पावर प्लेको लाभ उनीहरूले उठाउन सकेनन्। उनीहरूले ६ ओभरमा ५७ रन जोडे। त्यसपछि अमित मिश्राले रोहितलाई बोल्ड गरे। रोहितले २० बलमा ३० रन जोडेका थिए। त्यसपछि तेश्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका बेन कटिंग २ रनमा पेभेलियन फर्किए। उनको विकेट अक्षर पटेलले लिएका हुन्। डी कक ३५ रन बनाएपछि आउट भए। ततःपश्चात यादव र क्रुणालले चौथो विकेटका लागि ३० रनको साझेदारी गरे। यादबलाई रबाडाले २६ रन बनाएपछि आउट गरिदिए।
त्यसपछि ब्याटिङ गर्न आएका हार्दिकले १५ बलमा ३२ रन बनाए। उनी पनि रबाडाको बलमा पेभेलियन फर्किए। क्रुणालले २६ बलमा नटआउट ३७ रनको योगदान दिए। मुम्बईले अन्तिम ३ ओभरमा ५० रन जोड्यो। दिल्लीका लागि रबाडाले २ विकेट लिए भने मिश्रा र पटेलले समान १-१ विकेट लिए। हिजोको खेलमा नेपालका स्पिनर संदिप लामिछाने अन्तिम ११ मा परेनन्।
सुनकोशीमा र्‍याफ्टिङ गरेर फर्किए दाहाल
नेतृत्वविहीन नेविसंघले मनायो जन्मजयन्ती
​सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी प्रकरणपछि नेकपा महासचिवलाई निलम्बनको माग !
विप्लव समूहसँग वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको छः गृहमन्त्री थापा
देउवाले भने, मेरो विरोध गर्न छुट छ, पार्टीलाई क्षति पुग्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोला
नख्खु विस्फोट आरोपमा विप्लव माओवादीका थप कार्यकर्ता पक्राउ
ओली–नेपाल सुलह, सांगठनिक एकता ९ गतेअघि
विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ : देउवा
नेपालमा कफी उत्पादनः किसानका लागि रोजगारी
प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीलाई काउन्टर दिन काँग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै